Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan'Andriamanitra! Vonona ve ianao? - jwjw.org
Mandehana amin'ny Navigation amin'ny atiny
Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan'Andriamanitra! Vonona ve ianao?
Manaraka Entry: Hevitra ato Anatiny
Post Header Ankoatr'izay
Mametaka daty navoaka ny daty sy ny fotoana
Paositra daty sy ora navaina apetraka
Published Post Mpanoratra
Fanamarihana Actions Snippet
Tsy mandeha ny fanehoan-kevitra.
Arakaraka ny nanjary mampisafotofoto ny maro ny fotoana, ny Tenin'Andriamanitra dia whaTokony hijery ny olona. Io no fanilon'ny fahamarinana mamirapiratra izay afaka manampy ny olona hanitsy ny fivavahany amin'ilay Tsitoha.
Betsaka ny lehilahy sy ny fikambanana maniry ny hijeren'ny olona azy ireo, milaza fa manana ny fanohanan'Andriamanitra izy ary manao famantarana mahery. Fa ny tena olon'Andriamanitra dia tsy ho voafitaka. Ny tenin'olombelona fotsiny dia miteraka famoizam-po. Jeremia 10: 23
Ireo izay tia an 'Andriamanitra dia hibanjina hatrany ireo hafatr'Andriamanitra hahazoana toky sy fitarihana. Ity tranonkala ity dia manampy ny olona hanamarina ny zavatra inoan'izy ireo ary hanitsy ny fivavahany, raha ilaina, mba hanana fifandraisana tsara kokoa amin'ilay Tsitoha. Asan'ny Apostoly 17: 11-12
Mahatsiaro ho toy ny tsy mila manamarina ny zavatra inoanao ve ianao? Izany indrindra ny mpanohitra lehibe an'ny Tsitoha te-hieritreritra anao. Tiany hanaraka ny tenin'olombelona ny olona fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Mety hampidi-doza ny fahafaham-po.
Amin'ny vanim-potoana farany amin'ny andron'ny Jentilisa, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe "ny fotoan'ny farany" dia hisy fifohazana ara-panahy sy fanadiovana amin'ny fampianarana maloto. Na izany aza, mba hadio ara-panahy dia mila mamantatra ireo fahamarinana ara-Baiboly mahitsy avy amin'Andriamanitra fa tsy fampianarana miolakolaka sy miolakolaka avy amin'ny olona. Amin'ny alàlan'ny fitarihana ny saina amin'ireo soratra masina ara-tsindrimandrin'Andriamanitra, ity tranonkala ity dia manampy ny mpikatsaka ny marina hanao izany ary maro hafa! 2 Timothy 3: 16-17
Aza misalasala mijery ireto tantara sy lohahevitra ao amin'ny Baiboly manaraka ireto. Aza misalasala manome hevitra (Mampiasà anaram-bosotra raha tianao) ary manaova fikarohana amin'ny saina nomen'Andriamanitra anao. Tadidio fa Andriamanitra no manome ny tena fahendrena. Tsy olona. Ny mitady ny marina avy amin'Andriamanitra dia zavatra mendri-kaja hatao. Toy ny tamin'ny andron'i Jesosy, fikambanana ara-pivavahana maro no mametraka tahotra na fahafaham-po amin'ny mpikambana ao aminy mba hisakanana azy ireo tsy hikaroka izany. Fa raha misy fikambanana mino fa manana ny marina izy ireo dia tsy tokony hatahotra ny fitsapana ny fotopampianarany satria tsy voaporofo fa diso izy ireo. Ka maninona ireo fikambanana ara-pivavahana maro be no manakana ny mpikambana ao aminy tsy hikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra? Matahotra kokoa izy ireo hiaro ny fikambananany avy eo hikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra! Ny fitiavan'izy ireo ny fandaminany dia matanjaka kokoa noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manantena aho fa tia an'Andriamanitra mihoatra ny olona na fikambanana tsy lavorary ianao. Hotahina anie ny fitadiavanao! Salamo 119: 167- 120: 2 ;Matio 6: 33
Ho avy tsy ho ela ny Fanjakan'Andriamanitra! Vonona ve ianao? © 2021 Mpangataka avy amin'i DysineLab
Mandehana amin'ny Start Navigation
Mandehana amin'ny fanombohana
Ikona zana-tsipìka Arrow Up Icon Arrow Ikona 2 Search Icon Atsaharo ny sary masina Burger Icon Bebe kokoa Ikona miakatra-midina